Ma AirPod anounza kushomeka kweApple | IPhone nhau
AirPods inounza kushomeka kweApple
Luis Padilla | | IPhone zvishongedzo, Noticias
AirPods ndeye Apple yazvino kuburitswa, chishongedzo chemidziyo yedu inomiririra yakakosha kufambira mberi pamusoro peyakajairwa ma-headphones asina waya nekuda kwekureruka kwekugadziriswa nekubatana, kuzvitonga kwayo uye kusangana kwayo kwakakwana neiyo Apple ecosystem Asi maAirPod aburitsa pachena kumwe kushomeka kweApple munzvimbo dzakasiyana: Siri, watchOS, tvOS ... Uku ndiko kukanganisa kana mashandisiro akaipa ayo kusvika parizvino anga asina kumira zvakanyanya asi kuti maAirPod akajekesa.
1 Siri, mudzidzi wekusingaperi
2 Mumhanzi paApple Tarisa
3 Kukanganisa nemaikorofoni
4 Uye iyo Apple TV?
5 Nhau dzakanaka: zvese zvinogadziriswa
Siri, mudzidzi wekusingaperi
Kupfuura mubatsiri chaiye, Siri anogara achiita semudzidzi murombo. Hongu, yafambira mberi asi ichinonoka zvakanyanya. MaAirPod anotoda kuti titange kushandisa mubatsiri waApple, asi zvinoitika kuti patinoona tinoona kuti pane zvinhu zvatisingakwanise kuzadzisa uye tinofanirwa kutora iyo iPhone muhomwe yedu. Iwe unoda here kuteerera podcast paCastro kana paOvercast? Zvakanaka, kubva kuApple mahedhifoni anopinza Siri iwe haugone kuzviita. Iwe unoda kukwidza vhoriyamu isina internet kufukidza mukati me ndege? Zvakanaka, hausi kuzowana pamwe naSiri futi.
Hongu, ichokwadi kuti tinogona kushandisa yedu Apple Watch, chero munhu anayo, kuita zvese izvo zvinhu pasina kutora iyo iPhone kubva muhombodo, asi handizvo zvatiri kuda. Kana edu maAirPod akamanikidza isu kushandisa Siri kudzora zvese, Siri anofanira kuita izvo chete: kudzora zvese. Kubatanidzwa nevechitatu-bato kunyorera kwakasvika gore rino neIOS 10, asi haina kukwana, uye inyaya yakamirira iyo Apple inofanira kugadzirisa. Izvo zvakafanana nekudiwa kwekushandisa iyo internet kunyangwe yemabasa epanyama akadai sekukwiridzira vhoriyamu yekutamba. Mubvunzo kune wikipedia unoda kubatana, asi mamwe akawanda mabasa anoitwa akananga pachiridzwa chedu icho chine internet yekubatanidza chisina basa zvachose. Iwo mutengo uyo Siri inogona kushanda isingaenderani, zvaive pamberi uye zvakatonyanya kudaro izvozvi.
Mumhanzi paApple Tarisa
Ehe, Apple inozvirumbidza kuti yayo Apple Watch inogona kuchengeta kusvika ku8GB (yakati pfuurei) yezviri mukati uye kuti nekuda kweizvozvo isu tinogona kuteerera mumhanzi zvakananga kubva pawatch pasina kushandisa iyo iPhone. NeApple Watch Series 2 uye GPS yayo tinogona kunyange kuenda kunze kunotamba mitambo pasina iyo iPhone uye kwete kurasikirwa chero dhata kubva parwendo rwedu, kusanganisira kuronga pamepu. Uye ichokwadi, asi nzira yazvinoitwa nayo isinganetsi.
Chinhu chisinganzwisisike ndechekuti isu tinogona chete kuwiriranisa zvinyorwa neApple Watch, uye kwete zvinyorwa, asi "imwechete playlist". Uyu muganho usina anonzwisisa zvizere uye unowedzerwazve nenyaya yekuti kuwiriranisa runyorwa paawa kunonoka, kunonoka zvakanyanya. Kana isu tikawedzera izvo zvekuti iwe haugare uchiwana shanduko dzaunoita mune rondedzero yakawiriraniswa neApple Watch, zvirokwazvo mhedzisiro ndeyekuti chikamu cheiyo cheOSOS 3 ichiri chakasvibira kwazvo.
Chinhu chakandishamisa zvisizvo inyaya yekuti maikorofoni yeApple Watch haigone kushandiswa seyese-isina maoko pane yako iPhone, uye kwete sosi yekuisa. Kana iwe uine maAirPod akasungirirwa uye uchida kurekodha vhidhiyo, maikorofoni inodzimwa uye maikorofoni yeiyo iPhone inoshandiswa. Izvozvowo ndezvechokwadi paunoshandisa mamwe mapurogiramu kunyora podcast. Iyo maikorofoni yeAirPods haisiyo yakanakisa pamusika, kure nazvo, asi nei ndichigona kushandisa mic yeEarPods uye kwete iyo yeAirPods? Nei Apple isingandiregedze ndisarudze iyo odhiyo yekuisa yandinoda kushandisa nguva dzese?
Uye iyo Apple TV?
Nei Apple yakasiya Apple TV kunze kweiyo ecosystem inosanganiswa neAirPods? Inounza pamwe zvese zvakakosha kuti ive mukati, uye ichokwadi chishandiso chinogona kubatsira zvakanyanya kubva kune izvo zvinopihwa neAirPod, asi zvisinganzwisisike "mashiripiti" eAirPods haasvike kuApple TV. Ehe, inoenderana, asi iwe unofanirwa kuigadzirisa senge chero chebluetooth headset. Kutarisa here? Apple ichiri kuona Apple TV sechinhuwo zvacho chekutandarira here?
Nhau dzakanaka: zvese zvinogadziriswa
Chinhu chakanakisa pane zvese izvi ndechekuti inobata nezvinetso zve software, uye nekudaro nemhinduro yakapusa, yakapusa senge yekuvandudza. Kugadzirwa kwechigadzirwa senge ichi kunoratidza kutanga kwechikamu chitsva cheApple (iwo ekutanga maApple-akachonyorwa mahedhifoni asina waya, kunze kweBeats) haaigona kunge akaitwa pasina mepu yemugwagwa inoratidza kuvandudzwa kunodiwa, uye kukundikana uku kunofanira kunge kuri kudarika yakaonekwa nevanjiniya, kana zvakadaro tinotarisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » AirPods inounza kushomeka kweApple
Zvakanaka! Ini ndinonakidzwa nekuverenga zvinyorwa izvo zvisina kungozvitsaurira kune anoyamwa masokisi, asi kugadzira kutsoropodza kwakakodzera kuitira kuti uvandudze mhedzisiro yazvino. Ndatenda!
Pindura kuna EzeNH
Super Mario Run inoenderera ichiputsa zvinyorwa zvekurodha pasi
8 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Zvita 26)